Chrome OS 75 iri pano ine nyowani yevabereki masimba | Linux Vakapindwa muropa
Google yakave nemufaro we zivisa kuvhurwa kwe Chrome OS 75, iyo nyowani vhezheni yedesktop yako inoshanda sisitimu iyo, nenzira yakapusa uye yepamutemo, inowanikwa chete kune Chromebook zvishandiso. Izvi (mukufungidzira) hombe kuvandudza kunouya nezvitsva maficha uye kuita uye kugadzirisa kugadzirisa. Iyo vhezheni yakanyorwa kunzi "kugadzikana" iri chaizvo v75.0.3770.102 (Platform vhezheni 12105.75.0). Zvichida ruzivo rwunonyanya kufarira vaverengi vedu ndirwo rwakabatana nekumhanya kweLinux kunyorera.
Chrome OS yanga ichienderana neLinux kunyorera kwemwedzi mishoma ikozvino uye nhau dzatiri kutaura nezvadzo ndidzo izvozvi "Linux" inokwanisa kuwana zvishandiso zveApple kuburikidza neUSB. Tsigiro yekumhanyisa Linux maapplication paGoogle Chrome ichiri mubeta, asi zvinowana zvirinani nese kuburitswa nyowani kweGoogle desktop desktop system. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko anouya neChannel OS 75.
Chii chitsva mu Chrome OS 75
Basa kubvumira vabereki kuti vape vana vavo nguva yakawanda pane zvishandiso zvine Chrome inoshanda sisitimu.
Mutsva Mubatsiri wevana (ane hushamwari wemwana) maakaundi evana.
Linux (Beta) ikozvino inokwanisa kuwana zvishandiso zveApple pamusoro peUSB.
Iyo Files application ikozvino inotsigira chechitatu-bato faira kunyorera.
Wakawedzera rutsigiro rwePIN kodhi nemaprinta emuno emidziyo yakachengetedzwa.
Chengetedzo: Microarchitecture dhata sampling kudzikisira.
Iyo itsva vhezheni yeChrome OS yatotanga kusvika kune ese madhijitari akatsigirwa, zvinoreva kuti, ndiani asati agamuchira kare, anozoigamuchira mumaawa anotevera / mazuva. Kuti utarise kana iyo yekuvandudza yakatimirira, isu tinofanirwa kuenda kune iyo peji rezvisarudzo "About Chrome OS", zvakafanana nezvatinozviita muGoogle webhu browser. Kana zviripo, kurodha pasi uye kumisikidza zvinotanga otomatiki. Wakatogamuchira here?
Chrome OS 74 inosvika iine mubatanidzwa wekutsvaga mubatsiri uye nezvimwe
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Chrome OS 75 iri pano ine nyowani yevabereki yekudzora uye nekuvandudza kusangana kweLinux maapp
Chokwadi ndechekuti ini ndinofarira kushandisa GNU-Linux yakanangana kwete chigadzirwa cheGoogle. Ini handioni chero mukana kushandisa Chrome OS.
DOSBox ichiri mupenyu uye inogadziriswazve